Lawula i-Android yakho ngezimbo zomzimba ngendlela enomdla kwezi zixhobo zi-2 | I-Androidsis
Ngalesi sibini senkqubo onokuyenza lawula ngokupheleleyo i-Android yakho ngezimbo zomzimba ngendlela enomdla. Xa iApple yazise ngale ndlela yokunxibelelana nefowuni kwaye sibona ntoni ikwi-Android Pie; nangona ayisiyiyo eyokuqala okanye yesibini eyathi ngaphambili yazisa olu hlobo lolawulo.
Nangona kunjalo into esiza kuyenza kukugoba i-curl, kuba siza kusebenzisa usetyenziso ukusebenzisa izijekulo ezikwisikrini, ngelixa silisebenzisa kwenye inzwa yeminwe efanayo. Oko kukuthi, ngezimbo zomzimba ezimbalwa siya kulawula konke ukuhamba esikwenzayo kwidesktop, kunye nokunye siya kulawula ezinye izinto zobuchwephesha njengokunyusa ukukhanya kwefowuni okanye ivolumu uqobo.
1 Izimbo zomzimba zenzwa yomnwe yentshukumo yobugcisa
2 Iimpawu zomda zokujonga izijekulo kwi-Android yakho
Izimbo zomzimba zenzwa yomnwe yentshukumo yobugcisa
Iminwe yokuswipe yinkqubo entle esivumela ukuba sisebenzise izijekulo kwiminwe yeminwe efanayo ukwenza iintshukumo ezahlukeneyo njengokukhanyisa isibane, ukudlala imithombo yeendaba, ukuvimba ukujikeleza kwesikrini nangaphezulu esiza kudwelisa ngoku.
Ukulawula ifowuni yakho ngezimbo zomzimba ngendlela enomdla, siza kukuvumela Iminwe yeminwe iswayipha kwezo zenzo zobugcisa kwaye ke siyasiqhela ukusebenzisa inzwa kwinto enye, ngelixa izijekulo zenye insiza ziya kusetyenziswa ukuhamba. Yiyo loo nto sifikelela kwamanye amava ahluke kakhulu apho sinxibelelana neselfowuni.
Ukuprintwa kweminwe inezimbo zomzimba ezine kwisenzisi somnwe: phezulu, ezantsi ekunene nasekhohlo. Ukusuka kuqwalaselo lweapps sinokwabela olu luhlu lwezenzo:
Layita / ucime isibane.
Bonisa izaziso / ipaneli yokufikelela ngokukhawuleza.
Iiapps zamva nje.
Tshintshela phakathi kokwahlulahlula isikrini.
Dlala / misa ikhefu kwimidiya.
Ingoma elandelayo / yangaphambili.
Tshixa ujikeleze isikrini.
Qalisa nayiphi na indlela emfutshane.
Kulungile ukukwazi ukusebenzisa imisebenzi yeTasker leyo ivula uluhlu olubanzi lwezinto ezinokufumaneka simahla. Nangona ewe, udinga i-Android 8.0 okanye ngaphezulu ukuyenza isebenze; a isivamvo somnwe seminwe onokuvula ngaso Windows 10 ukuba uyafuna.
Umthuthukisi: Amasimi aseAdrian
Iimpawu zomda zokujonga izijekulo kwi-Android yakho
Izimbo zomda ngu usetyenziso olukhulu ngomndilili wamanqaku ayi-4,7 kwiVenkile yeGoogle Play. Le app ifumaneka ngee-1,59 ze-euro, nangona ungafuni ukuya kuphuma, kukho enye into ebizwa ngokuba yi-Fluid Navigation esebenza kakuhle, nangona ingenalo uphononongo oluninzi kwaye ithandwa njengokuqala.
Ngamafutshane, Iimpawu zomda zikuvumela yenza amanyathelo athile kwizimbo zomzimba kumacala omnatha weselfowuni yakho ye-Android. Phakathi kwezi zandla zomzimba sinokufumana amaphepha-ndaba, ucinezele kabini, ixesha elide, isenzo sangasemva, isenzo nokubamba, ukutyhala kunye nesilayidi kunye nolawulo lweenyawo.
Zonke ezi zizenzo onokuzabela kwizimbo zomzimba:
Qalisa usetyenziso okanye indlela emfutshane.
Amaqhosha okuhamba: umva, ikhaya kunye neeapps zakutshanje.
Yandisa ibha yomgangatho: izaziso okanye ipaneli yokufikelela ngokukhawuleza.
Ukucima iselfowuni / ukuqala kwakhona kokukhetha.
Lungisa ukuqaqamba okanye ivolumu.
Tshintshela kwi-app yamva nje.
Indawo apho siza kusebenzisa khona izimbo zomzimba zingenziwa ngokwezifiso isikhundla, ubude nobubanzi. Uhlelo lokusebenza olunamandla kakhulu lokufikelela kulawulo lwesimbo se-Android yakho, eyongezwe kwiFingerprint Swipes, inikezela ngamanye amava ahluke kakhulu kunalawo bendiqhele ukuwenza.
Kwaye kwakuthethwe ngaphambili, unayo ukhetho lokufaka ukuKhangela kuFluid ephinda-phinda uninzi lwezinto zomzimba we-Edge. Izisa izibonelelo ezithile njengokukwazi ukumilisela ukukhangela kuGoogle, tshintsha phakathi kwebhodi yezitshixo, ukukhangela ngelizwi okanye uMncedisi kaGoogle; khumbula unako Sebenzisa uMncedisi kaGoogle asebenzise iqhosha elibonakalayo.
Iiapps ezimbini ezenza isibini esigqibeleleyo ukuya kolunye uhlobo lonxibelelwano kunye neselula yakho Android. Ngokukodwa xa ungafuni ukulinda uhlaziyo olulandelayo lweselfowuni yakho ukuze uzise njengoko kuya kuba njalo ngeSamsung. Ke ungaphoswa leli thuba lihle kwaye ufumane kwangoko ukuba yintoni na ukuhambisa yonke into kwiselfowuni yakho ngezo zijekulo siqhele ukuzisebenzisa kwizixhobo zethu ze-Android.
Umthuthukisi: ChAYI i-dev.
ixabiso: € 0,89
Ulwaluko lokuhamba emanzini
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungayilawula njani i-Android yakho ngokuthambo kwezi zixhobo zimbini ngendlela enomdla